Biiroon Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa teeknolojii haaraa waliin gahiinsa bishaan dhugaatii isa sirrii ta'e agarsiisu hojiirra oolchuuf - | - OBN
Biiroon Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa teeknolojii haaraa waliin gahiinsa bishaan dhugaatii isa sirrii ta'e agarsiisu hojiirra oolchuuf
OBN Mud. 25, 2011 - Biiroon Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa Teeknolojii haaraa waliin gahiinsa bishaan dhugaatii isa sirrii ta'e agarsiisu hojiirra oolchuuf jedhameera.
Waliin gahiinsa bishaan dhugaatii naannoo Oromiyaa ragaa guutuun argachuu dandeessisuu teeknolojii haaraa kampaanii "Cosmos"jedhamu Ingiliziirraa Doolaara Ameerikaa Miiliyoona tokkoo oliin bituun hojiirraa oolchaa jiraachuu Biiroon Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa beeksise.
Baajatni bittaa teeknolojichaas gargaarsa Baankii Afriikaa fi Addunyarraa kan argame ta'uu himameera.
Teeknolojiin haaraan kun, dhiyeessii bishaan dhugaatii naannoo Oromiyaa keessa ture, isa dhugaa adda baasuuf gargaara jedhan hooggannaan Biiroo Qabeenya Bishaanii fi Inarajii Oromiyaa obbo Seefaddin Mahaadii.
Komii gama dhiyeessii bishaaan qulqulluun ka'aa ture adda baasuun deebii itti kennuuf gargaaras jedhan.
Teeknolojichi piroojektoota bishaanii ijaarsi isaanii harkifatanis adda kan baasudhas jedhame.
Biiroon Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa itti fayyadama teeknolojii haaraa kanarrrattis, ogeeyyii waajjira bishaanii Godinaalee fi Aanaalee irraa dhufan 840'f Magaalaa Adaamaatti leenjii kenneera.
Hirmaattonni leenjichaas, teeknolojichii bu'a qabeessaa, itti fayyadama isaatiifis hubannoo arganneerraa jedhan.
Naannoo Oromiyaatti namoonni miiliyoona 20 ta'an, bishaan qulqulluu argachaa akka hin jirre ragaan Biiroo Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaarra arganne ni agarsiisa. Habtaamuu Saamu'eelituu gabaase.
338 Views 1/3/19